मित्र कसरी पाउन: unbanal सुझावहरू
मित्र अक्सर, प्रेम भन्दा उच्च कदर गर्दै किनभने मित्रता सम्बन्ध थप इमानदार र भरोसायोग्य। तथापि, एक असल मित्र आफ्नो प्रिय भन्दा गाह्रो पाउन वा प्रेम किनभने मात्र पर्याप्त सेक्स इच्छा छ, एक प्रेम, तर मित्रताको लागि एक धेरै ठूलो शवर affinity अक्सर उत्पन्न गर्दैन आवश्यक छ। कसरी मित्र बनाउन?
सबै को पहिलो, तपाईंले आफ्नो सामाजिक सर्कल पहिले नै हो जसले ती मानिसहरूले ध्यान गर्न आवश्यक छ। सायद तिनीहरूलाई बारेमा धेरै थाहा छैन मनोरंजक कुरा पत्ता लगाउन जाँच सामाजिक सञ्जाल मा आफ्नो पृष्ठ। उदाहरणका लागि, तपाईंले नै चलचित्र जस्तै एक व्यक्ति। यो सिनेमाको प्लट बारेमा तपाईंको धारणा उहाँको सन्देश लेख्नुहोस्। सामान्यतया मानिसहरू भावनात्मक यस्तो रिपोर्ट प्रतिक्रिया। त्यसपछि तपाईं यो विधा एक फिलिम मा चलचित्र जान भनेर व्यक्ति आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
तर आवश्यक छैन मात्र आफ्नो मनपर्ने चलचित्र, संगीत र यति मा आधारित हुन। तपाईं किन भन्छौ, मित्र को आफ्नो सर्कल देखि मान्छे मात्र सकारात्मक गुण रेकर्ड हुनेछ र मनाउन जो अवलोकन, एक नोटबुक, र तपाईं कम्तिमा तीन प्रविष्टिहरू गर्न आवश्यक दिन राख्नुहोस्। एक समय पछि तपाईं बारेमा फरक फरक विचार गर्न भएका छन् याद हुनेछ। आफ्नो अवलोकन कोसँग तपाईं थप कुराकानी ती साझेदारी गर्न सकिन्छ। तपाईं आँखा लागि मान्छे प्रशंसा र आँखा लागि आक्रमण तर्क तिनीहरूलाई रक्षा गर्न आवश्यक छ। यो तपाईं विश्वस्त प्रेरित छौँ किनभने, धेरै सकारात्मक प्रतिष्ठा तपाईं सिर्जना गर्नेछ र धेरै मानिसहरू अधिक तपाईं कुरा गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ। यो प्रश्न अर्थ आफैमा समाधान हुनेछ "मित्र कसरी पाउन", आफूलाई चाहनुहुन्छ हुनेछ मानिसहरू मित्र को सर्कलमा समावेश गर्न।
जहाँ मित्र को स्थिर सर्कल लागि बाहेक, मित्र फेला पार्न? आकस्मिक सम्पर्क, मान्छे भन्दा, सँगै आवेग ल्याउँछ। त्यसैले आफ्नो सोख वा व्यक्तिगत विकास को लागि प्रशिक्षण समर्पित पाठ्यक्रम मा जाने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो मित्र कसरी फेला पार्न र आफैलाई उत्प्रेरित गर्न? तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ कि, तपाईं आफ्नो शौक बारेमा जानकारी को सबै भन्दा ठूलो सम्भव रकम आवश्यक पर्छ। आफ्नो ज्ञान बढाने, तपाईंले आफ्नो interestingness तिनीहरूले योग्य मान्छे यदि तपाईं सँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ के निर्भर किनभने, हरेक दिन आवश्यक छ। निस्सन्देह, तपाईंले अरूलाई आफ्नो सहानुभूति जीत प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ - तपाईं केहि सिकाउन सोध्नुहोस्। यो विधि काम गर्छ, तर तपाईं सजिलै सामाग्री बुझ्न गर्नुपर्छ र धेरै भावनात्मक तयार र ईमानदारी आफ्नो सल्लाहकार पराउँछु। व्यक्तिगत विकास को लागि राम्रो प्रशिक्षण - तथापि, साथीहरू फेला पार्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ। तपाईं खुलस्त आफू र कुराकानी गर्न आफ्नो क्षमता बारे जानकारी माग्न सक्छौं। अनुकूलित यी तालीम मा मानिसहरूलाई मदत र मित्र बनाउन।
वास्तवमा, के तपाईं आफ्नो मित्र दिन सक्छ बारेमा थप सोच्न आवश्यक छ। त्यो सट्टा "मित्र कसरी बनाउने?" सोध्दै चाहिन्छ एक साँच्चै असल मित्र हुन कसरी सोच्न को छ। तपाईं गर्न भावनात्मक सुन्न र समर्थन गर्न सिक्नुपर्छ, र यो कौशल सर्वश्रेष्ठ सबै प्रकार को तालीम मार्फत काम भएको छ। त्यसैले एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक को डोऱ्याइमा राम्रो समूह प्रशिक्षण खोज्न।
सिक्न psychotechnics संचार पुस्तकहरू देखि हुन सक्छ, तर समय अभ्यास गर्न जान हुनेछ। इन्टरनेटमा थप सजिलै कुराकानी गर्न थाल्छन्। यो डेटिंग साइटहरु र सामाजिक सञ्जाल प्रदान गर्दछ। यस्तो संचार वा गैर-बाध्यकारी, र तपाईं कुराकानी, मुख्य कुरा सुरु गर्न सजिलो हुनेछ - आफै अग्रसर नडराऊ। केही काम गर्दैन भने, त्यहाँ अझै पनि अन्य धेरै छ। मा नै समय असम्भव छ तर परिचितहरू अपमान। निस्सन्देह, मानिसहरूको प्रतिक्रिया सधैं अपेक्षित छन्। त्यसैले यसलाई उदाहरणका लागि अक्षरहरू को typology बारे केही पढ्न चोट छैन, विज्ञान socionics (लेखक VD Ermak र IM Eglit) गम्भीर साहित्य। यो तपाईं मनोवैज्ञानिक तपाईं मान्छे संग संगत सुरुदेखि चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
मित्र कसरी बनाउने र तिनीहरूलाई गुमाउनु छैन? तपाईं लगातार सम्बन्ध मा काम र मित्र पर्याप्त समय दिन आवश्यक छ। र त्यसपछि आफ्नो मित्रताको वर्ष आउन लागि पछिल्लो हुनेछ। , उपयोगी रोचक हुन, तपाईंको मित्र भावनात्मक राख्न - र तिमी एक मित्र हुन कसरी सोच्न छैन।
कसरी केटा संग प्रेम पर्नु गर्न?
के चलचित्र केटी हेर्न?
कसरी म उसलाई मन र अधित्याग प्राप्त छैन भनी बताउन?
दबाइ 'Metiluratsil': प्रयोगको लागि निर्देशन
आवेग, हेरविचार गर्न गाह्रो छ
कसरी 15 तल्ला "Varfeys" मा "परिसमापन" पारित गर्न
"Pantoprazole" चिकित्सा। प्रयोगको लागि निर्देशन
पृष्ठ दृश्य संख्या कसरी वृद्धि गर्न
सुँगुर र सुँगुर: प्रेम अनुकूलता
10 सस्ती शौक
तपाईं बालिका चाहनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा छ? - टिप्स र ट्रिक्स
प्रकार र चयन नियम: स्कूलमा बालिका लागि ब्लाउज